Kungani zemininingwane Ride Ingabe Indlela Engcono Ukuze Bheka Italy | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuhamba Italy > Kungani zemininingwane Ride Ingabe Indlela Engcono Ukuze Bheka Italy
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 20/11/2020)
Une eziningi ongakhetha lapho unquma kanjani ukuhamba. Thanda igama movie adumile, ungaya nge izindiza, izitimela, nezimoto. Uma kuziwa ukuthatha uhambo Italy, Nokho – kukhona izinzuzo ezithile zokuhamba ngesitimela.
kid ujabulela ride isitimela
izihlalo Airline kukhona elidume emfushane legroom, futhi abavunyelwe ukusebenzisa amadivaysi e-elekthronikhi phakathi ukusuka kanye kokwehla. Lokhu kusho izindiza emifushane, ngabe kufanele akhulekelwe kulona esihlalweni sakho esincane iningi indiza ngaphandle kweziphazamiso ezihlinzekwa Smartphones futhi ubuchwepheshe, this is really different from a train ride.
Izimoto ngokuvamile isinikeza isikhala kancane xaxa, kodwa ride kungaba esingemnandi futhi abanye abantu bekhathazwa khona imoto ukugula – ikakhulu uhambo olude lapho ungase ufune ukufunda noma ukudlala imidlalo. ukugibela isitimela, Ngokolunye uhlangothi, inikeza izihlalo ukhululekile futhi ride bushelelezi – ungaphazanyiswa ngu ukusuka eside nezikhathi lokubikezela, futhi isipiliyoni esihlukile from a train ride.
Lapho ehamba ngesitimela e-Italy, ungazama kakhulu izihlalo ergonomic ukhululekile nezindlwana umsindo-proofed entsha ijubane eliphezulu Frecciarossa 1000 isitimela.
Naples eGenoa Izitimela
ETurin eGenoa Izitimela
Rimini eGenoa Izitimela
Siena eGenoa Izitimela
Air travel inikeza ukubuka indawo ekhangayo zasemoyeni, kodwa isikhathi esifushane kuze indiza unyuka kuze ngaphezu emaphandleni. Nakuba imigwaqo akuzona ngokuvamile olunothile, imigwaqo ophakathi kwamadolobha banganikeza langa ukubukwa. Nokho, umshayeli kufanele anake emgwaqweni, ngakho kuphela abanye abagibeli kungaba ziyamangala lapho amagquma ugingqe noma ocean amahle. Ngesitimela evumela konke abahambi ukujabulela ubuhle bemvelo ngaphandle amawindi.
Enye yezinto uzwa kusuka kubantu e-Italy ngesitimela yindlela langa ngayo isitimela travel phakathi kwelanga.
Izincwajana zemininingwane amade Italy Zinhle ikakhulukazi so make sure you travel along the Cinque Terra between Levanto and La Spezia, noma ukuthatha uhambo phansi ogwini olusempumalanga kusukela Rimini ukuba Catania.
Messina ukuze Palermo Izitimela
Syracuse ukuze Palermo Izitimela
Sicily ukuze Palermo Izitimela
Catania ukuze Palermo Izitimela
Ngesitimela travel ezingabizi kakhulu kuka flying. ukuqashwa kwemoto kungaba engabizi, kodwa uma engeza umshwalense, igesi, nesikhathi (isikhathi esiningi ukushayela kusho okungaphezu nobusuku yokuhlala) uhambo lwakho ungathola ezibizayo okusheshayo. Ungase futhi uthatha ngobusuku obubodwa ngesitimela, ukuthi indlela ukukhokhela indawo yokuhlala kanye ezokuthutha kwelinye.
ERoma Levanto Izitimela
Siena La Spezia Izitimela
Rimini La Spezia Izitimela
La Spezia ukuze Levanto Izitimela
kwelanga isikhathi izintaba
Izitimela ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana ezimbalwa kakhulu kukhishwa kwekhabhoni than planes or cars. Ngokocwaningo, izimoto zikhipha kabili inani le-CO2 than trains do.
Izindiza kubangele kakhulu umthelela kwezemvelo. Lapho ekhetha phakathi flying noma ukuthatha isitimela, cabanga nganaku: izindiza zisebenzisa iningi fuel zabo ukusuka kanye kokwehla. Nakuba lokhu evens phezu ubude eside hola izindiza, kusho fuel okuningi ikhilomitha ngalinye isetshenziselwa izindiza emifushane, ezifana ukuhamba ngaphakathi Italy.
Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi aye sezindiza ngemoto noma itekisi, enezela ngaphezulu kukhishwa kwekhabhoni ukuba Imininingwane yabo. Lokhu kusho kwenza ngaphezulu umqondo kwemvelo ukuthatha i Ukugibela kwamadolobha isitimela kuka indiza efitjhani nofana drive.
Ngaphandle likaphethiloli kanye diesel ukusetshenziswa, kukhona nomsindo futhi ukungcoliswa komoya, kanye nesidingo yokupaka izimoto emadolobheni ukuthi kakade bantule izikhala green.
EMilan eTurin Izitimela
Lake Como ukuze eTurin Izitimela
Genoa ukuze eTurin Izitimela
Parma ukuze eTurin Izitimela
Lapho yokulinganisa Abashona ngayinye umgibeli olungamakhilomitha, ezindizayo kuphephile kakhulu kunezinye ukushayela. Nasi isizathu: kukhona mancane amathuba bomshayeli, futhi kunzima kakhulu ukuba ngumshayeli wendiza kunokuthola ilayisense yokushayela. Thatha ku izimo akhawunti umgwaqo nokukhathala ku ngemoto eside, kulula ukubona ukuthi kungani ukhetha indiza kuphephile kuka imoto.
Ngokuqhathaniswa izitimela, Nokho, izindiza akuzona ngempela njengoba ephephile. Izitimela ahambe ithrekhi ngesivinini kancane, okusho kukhona mancane amathuba yokushayeka kuqhathaniswa nezindiza ezinemishini yokuthwebula ephambili. Endabeni yokuphambuka, nezivinini kancane kusho ingozi kancane.
Florence ukuze Rimini Izitimela
ERoma Rimini Izitimela
EMilan Rimini Izitimela
Venice ukuze Rimini Izitimela
Kuvele onguthelawayeka onemizila isilinganiso ehambahambayo 2,500 abantu ngehora – ngenkathi ejwayelekile isitimela umugqa okuthwala 50,000 abantu ngehora. Lokhu kwenza ngesitimela travel kakhulu ngokushesha okukhulu ukushayela, ikakhulukazi uma uphumelele ezihamba kancane traffic, ayeke ezitaladini, amarobhothi futhi ngenakugwemeka ematfuba okungalungile. On top of ukuthi, umshayeli has ukugxila endleleni, ngakho uzoba engakwazi ukufunda, cwaningo, ubuthongo, noma ukusebenza.
Flying amabanga amade may ngokushesha kunokuba ehamba ngesitimela, kodwa amafushane, air travel asisho londoloza isikhathi. Okokuqala, udinga ukuya esikhumulweni sezindiza – ngokuvamile etholakala kude nezindawo zokuhlala. Udinga nokuba khona okungenani ihora ngaphambi kwesikhathi sakho sokusuka ungene ungene kwezokuphepha. Uma u hlola umthwalo, uzodinga uyilinde at carousel. Futhi yilokho phambi ukulibaziseka indiza noma ukuhamba noma ibhasi phakathi ezikhumulweni zezindiza namasango.
Genoa Venice Izitimela
ETurin Venice Izitimela
Parma Venice Izitimela
La Spezia Venice Izitimela
ilanga futhi sesitimela
Izikhumulo zezindiza zivame etholakala ngaphandle komuzi, okusho uma umhlaba, usazoba udinga ukuthatha imoto, ibhasi, noma uqeqeshe ungene edolobheni. Uma kuziwa ekuboneni izinto, imigwaqo Amadolobha kungenziwa eminyene futhi okunzima ukufinyelela ngemoto, ngakho ukuthatha isitimela kwenza omningi umuzwa ezindaweni ezisemadolobheni amakhulu.
Ufuna ukuthenga amathikithi Ukugibela isitimela kungabikho Imali yokubhuka? Vakashela SaveATrain.com to ukufinyelela eshibhe isitimela amazinga.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-a-train-ride-is-the-best-way-to-see-italy%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
environmentallyfriendly longtrainjourneys Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelitaly
10 Ukuqhekeka Kwamadolobha Kakhulu EYurophu
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe